Archive du 13-sept-2021
Rajoelina tany Antsiranana Tantara sisa ny arovava orona
Heverina fa efa azo atao ny famoriana olona noho ny fahataperan’ny hahamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tany sy ny firenena.
Voromanga sy vorondolo
Tsy finiavana hanakiana be fahatany, na fitia hitanisa ny tsy mety! Ekena fa maro tokoa ireo zava-bitan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny ary sarotra ny hiteny fa tsy miasa sy tsy nanao na inona na inona izy ireo.
Fitifirana teny Ambatobe Tsy misy fisamborana fa avela amin’izao ?
Nanamarika iny herinandro iny ny raharaha nahakasika ny Minisitra iray sy ny vadiny. Nisy resaka fanapoahana basy teny Ambatobe.
Pastera Mailhol Tsy mankasitraka fanonganam-panjakana
Na rahoviana na rahoviana dia tsy mankasitraka velively ny fanonganam-panjakana pastera Mailhol Andre Christian Dieudonné,
Vidim-piainana Hiakatra hatrany hatramin’ny faran’ny taona
Nisy fiakarany hatrany ny vidim-piainana nanomboka ny volana martsa, araka ny tatitry ny Ivon-toerana nasionaly momba ny antontan’isa (INSTAT).
Zava-doza tany Ambositra Novonoina avy eo naolana ilay zazavavy kely
Zazavavy kely iray vao 7 taona monja antsoina hoe : Fanambinantsoa Christina no novonoina tamin’ny fomba feno habibiana dia naolana avy eo tany Amoron'Isaha Ambany Atsinanana,
Mpandraharaha Kristianina “Mampahantra firenena ny fanafarana entana lava”
Tontosa ny sabotsy teo tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina ny fampiofanana momba ny atao hoe Kristianina mandraharaha.
Dia tany Avaratra Nanao vava be indray ny Filoha
Nandritra ny fitokanana ny làlana Antsiranana-Ramena mirefy 19 km eo ny sabotsy 11 septambra teo no nilazan’ny Filoha Ankehitriny Andry Rajoelina fa mihazakazaka ny fampandrosoana, niova tanteraka i Antsiranana.
Raharaha nahavoatonona olo-malaza Natao fanadihadiana ny vadin’i Mr Sayda ?
Hatreto, mbola tsy naharenesam-peo sy tsy naneho hevitra momba ilay toe-draharaha voalaza fa niseho teny Ambatobe ny mpanakanto Mr Sayda.
Baolina kitra Nomem-boninahitra tao amin’ny Paris FC i Bolida
Naneho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an’i Lalaina Nomenjanahary na « Bolida » ny Klioban’ny Paris FC ny sabotsy 11 septambra 2021.
Minisitra Boamiavotse Raharinirina Velon’ahiahy amin’ny doro tanety etsy sy eroa
“Sarotra ny ady. Mafy ny rivotra. Mahavaky fo ny mahita ny Tanindrazana levon'ny afo ».Ireo no teny namaritan’ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy